२८ वर्षीया सोमिकाले जन्माइन एकै पटक ५ शिशु, १ को मृत्यु « Rara Pati
२८ वर्षीया सोमिकाले जन्माइन एकै पटक ५ शिशु, १ को मृत्यु
१९ असोज, काठमाडौं । तपाईँ हामीले एक महिलाले तीन वा चारसम्म शिशु जन्माएको समाचार सुन्दै र देख्दै आएका थियौँ । सोमबार थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नुवाकोटकी २८ वर्षीया सोमिका तामाङले तीन र चार नभई एकै साथ ५ शिशु जन्माएकी छिन् ।
उनले शल्यक्रियामार्फत् सोमबार ५ शिशुलाई जन्म दिएको अस्पतालका निर्देशक डा. सङ्गीताकौशल मिश्रले जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये एक छोरा मृत जन्मिएका छन् । बाँकी चार भने सकुशल छन् । उनका अनुसार अहिले आमा र शिशुको अवस्था सामान्य नै रहेको छ । ‘आमा र बच्चाको अवस्था राम्रो छ । अक्सिजन दिनुपरेको छैन’,उनले भने, ‘अहिले बच्चाहरूलाई शिशु उपचार सघन कक्षमा राखिएको छ ।’
डा. मिश्रका अनुसार एक महिलाबाट पाँच शिशु विरलै जन्मन्छन् । जीवित शिशुमा चार जना छोरी हुन् । ती शिशुमध्ये क्रमशः पहिलाको तौल १.८ किलोग्राम, दोस्रोको आठ सय ग्राम, तेस्रोको १.९ किलोग्राम र चौथाको १.६ किलोग्राम छ । डा. मिश्रका अनुसार यसअघि तामाङको दुई पटकसम्म शिशु नजन्मेर खेर गएको थियो ।
२८ वर्षीया सोमिका तामाङ
एकै पटक ५ शिशु